Abaguquleli BeNtetho Yezandla YaseMerika Bafudukela EFlorida
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu
MEYI 13, 2015
AmaNgqina KaYehova Avula Iofisi Yokuguqulela YeNtetho Yezandla YaseMerika EFlorida
EFORT LAUDERDALE, Fla.—NgoNovemba 14, 2014, amaNgqina KaYehova aqalisa ukufudusa iqela eliguqulela iNtetho Yezandla YaseMerika, elisusa kwiZiko Lemfundo LeWatchtower elisePatterson, eNew York, elisa eFort Lauderdale, eFlorida. AmaNgqina ebeguqulela iBhayibhile neencwadi ezisekelwe kuyo zeNtetho Yezandla YaseMerika ePatterson ukususela ngo-1995. Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, amaNgqina ebefakela iiofisi ezintsha neendawo zokurekhoda kwisakhiwo saseFort Lauderdale. Iofisi yamaNgqina yokuguqulela iNtetho Yezandla YaseMerika iqale ukusebenza ngoMeyi 2015.
Iividiyo zamaNgqina zeNtetho Yezandla YaseMerika ziyafumaneka kwi-jw.org nakwiiDVD. Aphinda azisebenzise kwiintlanganiso aba nazo veki nganye kumabandla asehlabathini lonke angaphezu kwayi-500, naxa ehlanganisene kwiindawo ezinkulu, njengakwiindibano ezibakho kabini ngonyaka nakwiindibano zengingqi ezibakho nyaka ngamnye.
UJonathan Galvez, ovelela iqela labaguquleli abangamaNgqina beNtetho Yezandla YaseMerika eFlorida, uthi: “Usukelo lwethu kukuqinisekisa ukuba iividiyo zethu ziqondeka lula ebantwini abaninzi abasebenzisa iNtetho Yezandla YaseMerika, enoba basuka kweliphi ilizwe okanye bafunde kangakanani.” Waleka ngelithi: “Kukho amazwe amalunga nayi-45 asebenzisa iNtetho Yezandla YaseMerika, ibe njengezinye iilwimi, intetho yezandla iyahluka ngokweengingqi. Ekubeni ngoku sifudukele eFort Lauderdale, abaguquleli bakwisixeko esinabantu abaninzi nabahlukahlukeneyo abasebenzisa iNtetho Yezandla YaseMerika.”
Ngo-2014, uFrank Bechter, onesidanga esiphezulu kwizifundo zentlalo nezolwimi, waya kwindibano yengingqi yamaNgqina KaYehova yeNtetho Yezandla YaseMerika eRichmond, eVirginia, ngenjongo yokuphanda ngentetho yezandla nangabantu abangevayo. Esi sifundiswa sithi: “Kumcimbi obubanjelwe eRichmond, kuye kwacaca ukuba intlangano yenu izimisele ekuguquleleni nasekusebenziseni iNtetho Yezandla YaseMerika esemgangathweni, ubukhulu becala ngenxa yokuba nihlala nisebenzisa iividiyo eziguqulelweyo nezenziwe kakuhle zeevesi zeBhayibhile. Ndiyothulel’ umnqwazi iNtetho Yezandla YaseMerika ekwezi vidiyo.” Saleka ngelithi: “Ndiyawuxabisa umgudu owenziwa ngamaNgqina ngokuguqulela iBhayibhile ngeNtetho Yezandla YaseMerika ngendlela esemagqabini, kuba yincwadi ebalulekileyo ebantwini nakwimbali yehlabathi. Ndikholelwa nasekubeni abantu abangevayo bafanele, njengaye nabani na, bazifumane iincwadi ezibalulekileyo ezinefuthe kwihlabathi.”
Amaqela abaguquleli abangamaNgqina KaYehova asehlabathini lonke, aye avelisa aza asasaza iividiyo ezininzi ngeelwimi ezimalunga neziyi-80 zeentetho zezandla simahla. Kwakhona, amaNgqina KaYehova aye enza iapp yeJW Library Sign Language ekulula kuyo ukudawunlowuda, ukugcina nokudlala iividiyo zentetho yezandla ezikwi-jw.org.